Hery Rajaonarimampianina : Tohivaka ny fanohanana sy ny fangatahana ny filatsahany -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Tohivaka ny fanohanana sy ny fangatahana ny filatsahany
Hery Rajaonarimampianina : Tohivaka ny fanohanana sy ny fangatahana ny filatsahany
03/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Raha toa ka efa navoakan’ ny governemanta tamin ‘ny fomba ofisialy ny datim-pifidianana, dia efa taratra ireo izay ho kandida ary mihazakazaka mafy amin’ ny fitetezam-paritra maro samihafa. Mbola andrasan ‘ny be sy ny maro ihany koa ankoatr’ireo kandida izay efa hita soritra sy efa nilaza ampahi-be maso ny filatsahany ireo , ny firotsahan’ny filoham-pirenena ankehitriny Hery Rajaonarimampianina . Hafahana mamantatra izany anefa dia ny mety ho fametram-pialany na tsia 60 andro alohan’ ny datim-pifidianana izay efa nofaritana fa hanatanterahina ny fiodinana voalohany araka ny voalazan’ny lalàna. Fa na mbola baraingo aza io mety ho filatsahan’ ny filoham-pirenena ankehitriny amin’ ny fifidianana ho avy io, dia efa tohivakana hatrany ny fanohanana miaro ny fangatahana ny hilatsahany ho fidiana. Anisan ‘izany ny AMP na ny ampela manao politika tarihin’ i Brigitte Rasamoelina izay vao avy nahavita ny kongresin ‘ny antoko ny faran’ ny herinandro lasa teo, nilaza ny andray anjara feno amin’ ny fifidianana ny antoko AMP saingy tsy toy ny tamin’ ny taona 2013 fa kosa hanohana ny filoham-pirenena ankehitriny izay tsy iza fa Hery Rajaonarimampianina raha toa milatsaka ho fidiana ity farany.
Ankoatran’ ny antoko ampela manao politika izay tarihin’ i Brigitte Rasamoelina dia vao omaly ny solombavam-bahoaka lany tao Antsimondrano Harijaona Randriarimalala no nilaza ny fanohanany ny filoham-pirenena ankehitriny ““ ny fametram-pialako eo anivon’ ny vondrona parlemantera HVM dia raharahana antoko ihany, saingy mitohy hatrany kosa ny fanohanako ny filoham-pirenena……. mino ihany koa ao fa ho kandida ary hirotsaka ho fidihana hatrany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Hita sy tazana ao aminy mantsy ny fanirihana ny hampisondrotra hatrany ny firenena ,indrindra amin’ ny lafiny fampandrosoana”. Raha solombavam-bahoaka no resahina dia anisan ‘ny efa nangataka ny firotsahana sy ny fahavononany hanohana ihany koa ny solombavam-bahoaka lany tao Mananjary Anthelme Ramparany. Ary tsihahivina etoana ihany koa ny an ‘ny antoko MAF izay tarihin’ ny maître Avoko nandritra ny fivoriam-be izay niarahan’ireo mpikatroka kung-fu rehetra ary nilazan’izy ireo ny fanohanany ny filoha Hery Rajaonarimampianina “ Tsy afa-misaraka amin’ny tantaram-pirenena mihitsy ny Kung Fu hatramin’izay. Resy lahatra izahay fa ny filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina no hitondra fampandrosoana sy hitondra filaminana. Izany no nangatahanay ny hirotsahany mba hanohizany izany fampandrosoana izany. Efa amin’ity 2018 ity moa ny fiatrehana an’izay fifidianana filoham-pirenena izay, ka nandinika ny fomba fiatrehana izany izahay. Vonona ny mpanao Kung Fu rehetra hiatrika ny raharaham-pirenena mba ho fitsinjovana ny mahasoa ny tanindrazana ”, araka ny fanazavan’ny Grand Maitre Avoko hatrany .
Amparafaravola : Nosokafana ny bankin’ny masomboly
Hery Rajaonarimampianina : “Tsy ilaina intsony ny mampiditra ny firenena amin’ ny krizy”
Taorian’ny fandraisana andraikitra : Misokatra ireo lalam-pirenena